स्विमिङ खेल्दा श्वेता बिरामी ! (फोटो फिचर) « Ramailo छ
स्विमिङ खेल्दा श्वेता बिरामी ! (फोटो फिचर)
मौसम गर्मीको छ । गर्मी छल्न नायिका तथा निर्मात्री श्वेता खड्का स्विमिङ पुलतिर पुगेकी छन् । गत शुक्रबार होटल शाम्बालामा रहेको स्विमिङ पुलमा पुगेर श्वेताले स्विमिङ खेलिन् । श्वेतालाई पानी उतिसारे नफाप्ने रहेछ ।
‘म त बिरामी परें’, श्वेताले सुनाइन्, ‘दिनभर स्विमिङ अनि रातभर वल्र्डकप । दुवैले गाह्रो बनायो ।’ उसो त श्वेताले सर्पोट लिएको अर्जेन्टिना शनिबार रातीको खेलमा आइसल्यान्डसँग बराबरीमा रोकियो । अर्जेन्टिनाका मेस्सीले एक गोल पनि गरेनन् ।
यही तोडमा श्वेता बिरामी परेकी त होइनन् ? जे भएपनि अहिलेलाई भने स्विमिङका श्वेताका केही तस्बिरहरु हेर्नुस् :